DEPIOTE AVY AO FARAFANGANA : Tokony ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny faritra
Mahavelombolo ny lahateny nataon’ny filohan’ny antenimieram-pirenena satria voateniny avokoa ny asa rehetra izay efa nataon’ny solombavambahoaka sy mbola hataony, hoy ny Depiote voafidy tao Farafangana, Raheriarijaona Regina Clarisse. 17 octobre 2019
Nambarany fa ny antom-pisian’ny solombavambahoaka dia ny hanao tatitra sy hisolo vava ny vahoaka Malagasy manontolo ary efa hita taratra sahady izany nandritra izao fanombohana ny fivoriana ara-potoana faharoa tontosain’ny Antenimieram-pirenena izao. Ho an’ny Depioten’i Farafangana manokana, ny fampandrosoana haingana ny faritra no nambarany fa tokony ho laharapm-pahamehana ao anatin’ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2020. « Ny zavatra andrasanay voalohany mahakasika io tetibola io dia ny hanana fitsinjarana isaky ny faritra rehetra mba hisian’ny tena fampandrosoana azo tsapain-tanana. Efa isaorana sahady ny Filoha Andry Rajoelina manao ny ezaka rehetra sy manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny fitantanana ataony, mandinika sy mihevitra izay hampandrosoana ny firenena Malagasy. Tena zava-dehibe izany satria izany no zavatra andrasan’ny vahoaka Malagasy », hoy hatrany ny nambarany.
Tsy very anjara i Farafangana
Tsy very anjara ary tsy hadinon’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina ny Distrikan’i Farafangana raha ny nambarany. Hita izany hoy izy amin’ny fanorenana ny EPP manara-penitra any amin’ity faritra ity. Toy izany koa ny fananganana ny biraon’ny Minisiteran’ny Asa ary ny tena goavana indrindra sy andrasan’ny mponina dia ny fanorenana ny Oniversite any an-toerana.
Efa nanambara ny mahakasika ny fananganana io Oniversite io ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny nambarany. Nasian’ny Depiote Raheriarijaona Regina Clarisse resaka ihany koa ny mahakasika ny fifidianana ben’ny tanàna satria ireo no akaiky ny vahoaka indrindra. « Tsy ho ela isika dia hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna, izahay ao amin’ny IRD dia efa manana ny kandida natolotray manokana izay afaka hiara-hiasa tsara amin’ny fanjakana amin’ny fampandrosoana ary koa afaka hiara-hiasa amin’ny vahoaka », hoy hatrany ny nambarany.
Notsoriny avy hatrany koa fa tsy misy afa-tsy ny fiarahana amin’ny fitondram-panjakana ihany no hahafahana mampandroso haingana an’i Farafangana satria ny fitondrana amin’izao fotoana izao no tena nampihatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy.